विश्वमाझ अमेरिकाको पुनः परिचय गराउने अवसर – khabarmala.com
विश्वमाझ अमेरिकाको पुनः परिचय गराउने अवसर
Newportalmala १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६	No Comments
जोनाथन इ. हिलम्यान
नोभेम्बरमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी भएका जो बाइडनले विश्वका नेतामाझ एउटा उद्घोष गरिसकेका छन्, ‘अमेरिका इज ब्याक अगेन’ अर्थात अमेरिका फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्किंदैछ । अहिले विश्वले अमेरिकाको आगामी कदम कस्तो हुन्छ भनेर पर्खिरहेको छ ।
बाइडन–ह्यारिस प्रशासनले अमेरिकालाई विश्वमाझ पुनः परिचय गराउँदै गर्दा, उनीहरूले छनोट गर्ने शब्दले आन्तरिकरूपमा त अमेरिकालाई सहयोग पुग्नसक्छ नै, बाह्य देशसँगको साझेदारीमा पनि वृद्धि हुनसक्छ । अमेरिकालाई यसको प्रत्यक्ष फाइदा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हुनेछ ।
तपाईंहामीले ख्याल गरेकै हौँला, अमेरिकीहरू धेरै गफ गर्छन् । बाइडन–ह्यारिस प्रशासनले अमेरिकी जनतामाझ पहिलो प्रभाव कसरी पार्छ भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुनेछ ।
बाइडन–ह्यारिस प्रशासनलाई बधाईको शुभकामना सन्देश आउन, वार्ताहरू अघि बढाउन, चेतावनी दिन र संकट निस्तेज पार्न अवसर आउन बाँकी नै छ । र, यी सबै कुराको विश्वले चर्चा गर्ने नै छ ।
योसँगै विदेशी नेताहरूसँग अमेरिकी नयाँ प्रशासनको भेटघाट, बैठक आदि हुने नै छ । रणनीतिक दस्तावेजले आगामी दिनका प्राथमिकतालाई इङ्गित गर्दै कार्यकारी शाखाहरूलाई सोही रणनीति अनुरूप सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । सार्वजनिक मञ्चमा गरिने भाषणले नयाँ प्रशासनको भावी दिनका कदममा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
बाइडन–ह्यारिस प्रशासनलाई बधाईको शुभकामना सन्देश आउन, वार्ताहरू अघि बढाउन, चेतावनी दिन र संकट निस्तेज पार्न अवसर आउन बाँकी नै छ । र, यी सबै कुराको विश्वले चर्चा गर्ने नै छ । यसका लागि आफ्नो भाषणमा के भन्ने र कसरी भन्ने, यो ठम्याउन सक्नु पनि हालको अवस्थामा बाइडन—ह्यारिस प्रशासनका लागि प्रमुख चुनौती हो ।
आकर्षक शौलीको भाषणले अभावको पूर्ति गर्न त नसक्ला तर प्रभावकारी सन्देशले सम्भावनाको दायरा फराकिलो अवश्य बनाउँछ । यसो गर्नु सक्नु अतुलनीयरूपमा गाह्रो छ । जब राष्ट्रपतिले पेन्सिलभेनियामा बोल्छन्, टेक्सासमा बसेका मानिसले पनि त्यो भाषण सुन्छन् ।
जब अमेरिकाले रसियालाई चीनसरह आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गर्छ, मक्किएको अर्थतन्त्र र घट्दो क्रममा रहेको जनसंख्याको रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलाई यसले आनन्दित तुल्याउँछ । इतिहासका प्रतिस्पर्धी चीन र रसियालाई एकै ठाउँमा आउने गरी पेलान गर्दा यहाँ अमेरिकाको रणनीतिक अभाव देखिन्छ ।
यस्तै इन्डियामा, हङकङमा र दक्षिण कोरियामा बस्ने मानिसले पनि राष्ट्रपतिको भाषण सुनिरहेका हुन्छन् । आलोचक र प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिउत्तर दिन र झुक्याउन प्रतीक्षारत हुन्छन् । विश्व सरल रङ्गमञ्च होइन, यो एक अराजक र प्रतिस्पर्धी रणभूमि हो ।
विषय बदल्नुअघि ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिका विषयमा जानकारी लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘अमेरिका पहिलो’ नीति कच्चा र प्रत्युत्पादक भए पनि यसले अमेरिकाको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । अमेरिकीहरूका लागि उक्त नीति श्रवणीय नै थियो । ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ र अन्य विदेश नीतिको जार्गन शब्द सरल भाषामा भन्नुपर्दा उक्त नीतिले अमेरिकीहरूलाई सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो ।
‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नीति भुत्ते भयो । यसले खास अर्थमा अमेरिकीहरूलाई सहयोग गर्न सकेन । उल्टो अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रलाई खतराको संकेत दियो । केही साझेदार देश अमेरिकासँग रुष्ट बन्ने अवस्था आयो । यसले सजिलो चिजलाई अप्ठेरो बनायो । समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूले संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने अवस्था आयो । यसले व्यापार वार्ताका लागि समेत असहज अवस्थाको सृजना गर्‍यो । यसको मूल्य अमेरिकावासीले तिर्दैछन् ।
यसले अमेरिकीलाई एउटा पाठ भने सिकाएको छ । त्यो के भने ‘अमेरिका इज व्याक अगेन’ भन्दै गर्दा विदेश नीतिमा हामीले पहिलाको जस्तै क्रुद्ध भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने छैन । विदेश नीतिको बृहत् भाषणका लागि समय र स्थान हुन्छ तर त्यसबेला, विशेष गरी त्यतिबेला, अमेरिकीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीतिले उनीहरूको जीवनमा कसरी सुधार ल्याउँछ भन्ने जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिर्वतनको मुद्दा सम्बोधन गर्नेदेखि चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु आजका ठूला चुनौतीहरू हुन् ।
यो एक कार्यकालभन्दा धेरै समय लाग्ने विषय हो । प्रभावकारी प्रतिक्रिया जीवन्त राख्न पनि घरेलु समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले घरेलु समर्थकलाई प्रभाव पार्ने नीति ल्याउन नयाँ प्रशासनले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडनको सन्देश सुलभ हुनुका साथै निश्चितरूपमा अमेरिकापरस्त छ । साथै, विदेशीलाई पनि आह्वान गर्ने किसिमको छ । उनले विदेशमा बस्ने मध्यम वर्गीय मानिसमाझ आफ्नो सन्देश फैलाउँदैछन् ।
सन् २०१८ यता विश्वको बहुसंख्यक जनसंख्या इतिहासमै मध्यम वर्गीय अथवा धनी भएको छ । समृद्धि र सुरक्षाका लागि उनीहरूको मौलिक आकांक्षा एउटै किसिमको छ । उनीहरूको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको छ । सुदृढ अर्थतन्त्र, कम भ्रष्टाचार र स्वच्छ हावा विश्वका सबै मध्यम वर्गीय मानिसको फाइदासँग जोडिएको छ ।
अमेरिकाले दिन खोजेको सन्देश सही हिसाबमा बाह्य देशमा पुग्यो भने चीनसँग विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सहज हुनेछ । पहिलो सुझबुझपूर्ण कदमले शक्ति संघर्षका विषयमा स्थानीय तहमा रहेको धारणा परिर्वतन गर्नसक्छ । अनजानमै सही, महाशक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको कुराले अमेरिकाको प्रतिस्पर्धीलाई नै सहयोग पुर्‍याएको छ । जब अमेरिकाले रसियालाई चीनसरह आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गर्छ, मक्किएको अर्थतन्त्र र घट्दो क्रममा रहेको जनसंख्याको रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलाई यसले आनन्दित तुल्याउँछ । इतिहासका प्रतिस्पर्धी चीन र रसियालाई एकै ठाउँमा आउने गरी पेलान गर्दा यहाँ अमेरिकाको रणनीतिक अभाव देखिन्छ ।
चीनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिने कडा बयानले बेइजिङलाई थप शक्तिशाली बनाउन सक्छ । गत अप्रिलमा जब ट्रम्प प्रशासनले विश्व स्वास्थ सङ्गठन (डब्लुएचओ) बाट निस्किने तयारी गर्‍यो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार रोवर्ट ओ ब्रायनले भनेका थिए, ‘चीनले डब्लुएचओलाई करीब ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहयोग गर्छ, जुन अमेरिकाको तुलनामा दस भागको एक भाग हो ।
‘अमेरिका इज ब्याक अगेन’ एक प्रस्थानबिन्दु सन्देशमात्रै हो । यसभित्र शान्त भावना लुकेको छ जसमा आत्मविश्वास देखिन्छ । यसको परिपालकले यो सन्देशको मर्म भने पालना गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके ट्वीटरमा देखिएको भड्किलोपनमा ब्रेक लाग्नेछ र चीनले तीव्र र असुरक्षितरूपमा बढाउँदै गरेको सार्वजनिक कूटनीतिको विपरित हुनेछ ।
यद्यपि, डब्लुएचओ चिनियाँ प्रोपगाण्डाको माध्यम भएको छ ।’ चीनले गरेको थोरै कामका लागि धेरै गुनासो गर्नु र बधाई दिनुभन्दा पनि अमेरिका आफैँले पर्दा पछाडि प्रभावकारी काम गर्दै सफल कामको विश्व बजारमा सार्वजनिकरूपमा छलफल चलाउनुपर्छ ।
आलोचनात्मकरूपमा भन्नुपर्दा, विदेशी दर्शकले चीन र अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक चेस खेलको प्यादाका रूपमा आफूलाई देख्दैनन् । उनीहरूका आफ्नै चाहना र आवश्यकता छन् । विकासशील अर्थतन्त्रमा उनीहरूको विकल्पलाई सीमित राख्न आग्रह गर्नु आफैँलाई प्रत्युत्पादक हुने विषय हो । गत महिना ब्राजिलका चार ठूला टेलिकम कम्पनीले अमेरिकी सरकारी अधिकारीसँग भेट गर्न मनाही गरे । उनीहरूलाई हवाई नेटवर्कबाट बाहिर जान निरन्तर दबाब दिइएको थियो ।
तेस्रो देशको बजारमा चीनसँग प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको मानसिकताबाट बाहिर निस्किएर आफूलाई फाइदा हुने आर्थिक रणनीति अघि बढाउनुपर्छ । जब तपाईंले कार खरिद गर्न टेस्ट ड्राइभ गर्नुहुन्छ, विक्रेताले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भन्दा आफ्नो कारको कमजोरी बताएर ड्राइभ गर्न लगाउँदैन बरु उसको नभएको सुविधा बताएर टेस्ट ड्राइभको लागि प्रेरित गर्छ ।
अमेरिकाले हाल फाइभ जी प्रविधि जोड्न देशहरूलाई प्रोत्साहित गर्न वित्तपोषण गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि, अमेरिकी अधिकारीहरू वैकल्पिक लाभमा भन्दा चिनियाँ उपकरणका विषयमा ध्यान दिइरहेका छन् ।
सन्देशवाहकले पनि एक हदसम्म प्रभाव पार्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको विविधताको उपयोग गर्नुका साथै बाइडन–ह्यारिस प्रशासनले विदेशीहरूसँगको पहुँचका लागि मेयर र गभर्नरलाई पनि परिचालन गर्न सक्छन् । हाल धेरै जसो राज्यहरूका विदेशमा व्यापारिक कार्यालय छन् ।
स्थानीय अधिकारीसँग सम्बन्ध बढाउँदा दोरोहो फाइदा हुन्छ । एक त यसले विदेशमा घरेलु समर्थन निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भने अर्कोतर्फ विदेशीसँग व्यावहारिकरूपमै जोडिन सहयोग पुग्छ । यसको मतलब सबै विदेशी सम्बन्ध फाइदाजनक नै हुन्छ भन्ने होइन तर विदेशमन्त्रीले ‘राज्य र शहर’ को मन्त्री जसरी सोचेर अवसरको सृजना गर्न सक्छन् ।
(जोनाथन इ. हिलम्यान द एम्पारर्स न्यू रोड : चाइना एण्ड प्रोजेक्ट अफ सेन्चिरीका लेखक हुन् । यस्तै उनी वासिङटनस्थित रिकनेक्टिङ एसिया प्रोजेक्ट याट् द सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरन्याशनल स्टडिज्का निर्देशक पनि हुन् । सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरन्याशनल स्टडिजमा प्रकाशित यो लेख नेपालीमा भावानुवाद गरिएको हो ।)
Previous Previous post: अमेरिकाले विदेश नीति पुन:परिभाषित गर्नुपर्छ
Next Next post: 60 journalists were killed in 2020
नेपालमा सोमबार थपिए ९,२४७ संक्रमित, २१४ जनाको मृत्यु १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६
We have to serve the country in times of crises १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६
इजरायल गाजा युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्दै, विश्वका ठुला राष्ट्रहरु विभाजित १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६
नेपाल कोरोनाबाट एकै दिन एक सय ४५ को मृत्यु, सात हजार तीन सय ६८ मा संक्रमण १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६
खोप लगाएका व्यक्तिलाई किन भईरहेको छ कोरोना संक्रमण? १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६
राजदुत नियूक्तिः ओरालो लागेको कुटनीतिक १५ पुष २०७७, बुधबार ०४:२६